Ny akanjon'akanjo maingoka-akanjo - hariva, cocktail, fampakaram-bady, lava, fohy, ho an'ny ankizivavy feno
Maka akanjo mandritra ny fotoana manokana, tianao foana ny ho tsara tarehy, tsy trivial ary sexy. Ny akanjo bustier no tadiavinao. Ny soroka misokatra, decollete, manintona manintona ny tratrany, ny tendany sy ny tanany - izany rehetra izany dia sanganehana mendri-piderana, dia manintona sy mikaroka. Ny fananana azy dia ho lasa "kintana" misy antoko.
Iza no manao akanjo mafana?
Ny dikan'ny hoe "bustier" dia avy amin'ny buste frantsay, izay midika hoe "tratra". Tamin'ny voalohany, natao ho an'ny lobaka ny akanjo - kofehy iray, nisintona ny tavy ary nanohana ny tratra, izay nitafy teo ambanin'ny akanjo. Androany - bodisika kanto ity, manamboatra akanjo, mipetra-potsiny tsara tarehy. Ny fampidirana azy, ny vehivavy dia manitsy ny sorony, mitazona ny lanjany amin'ny fomba marina ary manandratra ny mofomamy aristokratika. Tahaka izany, ny manao azy ary ny "orinasa amin'ny satroka" - efa vonona ny sary tsara tarehy, tsara tarehy sy matevina, saingy toy ny misy foana "buts." Tokony hodinihana ny akanjo toy izany:
Koa satria tapaka tanteraka ny ampahany amin'ny vatany, dia tena ilaintsika tokoa ny tsy misy ny tsy fahampian-tsakafo eto amin'ity faritra ity: ny kôdeksa, ny felana lehibe, ny fampitandremana, ny ratra, izay sarotra ny manala baraka. Tsy midika izany fa ny akanjo toy izany ho an'ny vehivavy manana hoditra tsy lavorary dia taboo. Misy tricks sasany ny fomba hanafenana ireo hadisoana rehetra, saingy miaraka amin'ireto akanjo ireto dia ho toy ny mpihetsiketsika. Amin'ny ankapobeny dia misy fitaovana mangarahara matevina amin'ny endriny hafa na loko hafa dia ampiana, ohatra, menaka manify na chiffon izay mandrakotra ireny ampahany misokatra ireny.
Misy ny angano fa ny zazavavy miaraka amin'ny tratra marevaka dia tsy mendrika izany, tsy mihazakazaka tsara, mijery manjavozavo ary amin'ny hetsika bitika dia vonona ny "mandositra" avy amin'ny corset. Raha ny marina, ny bodice toy izany dia afaka manolotra tratra marevaka amin'ny hazavana tsara indrindra, ny zavatra manan-danja indrindra dia ny fisafidianana ny habeny mety, ary tsy hiezaka ny hionona amin'ny kely kokoa, te ho lasa malama kokoa. Raha tsy izany, aoriana kely, misy ny angano toy izany.
Amin'ny ankizivavy manana endrika lavorary, ny akanjo rehetra dia tsara tarehy ary ny akanjo-bustier dia tsy misy ankoatra. Mijery tsara ny ankizivavy miaraka amin'ny karazana "hourglass". Fa ny "triatra" na ny "rectangule" dia tsy hijery tsara azy io, na dia amin'ity tranga ity aza dia ilaina ny mamoaka ny silhouette ny akanjo - ny voalohany dia tsara kokoa ny mifidy akanjo-bustier miaraka amina lohan'ny tavy. Hahafinaritra tokoa raha ampidirina ao amin'ny faritra misy ny valopy ny volavolam-boky sasany, izany dia hampifandanja ny soroka. Ny faharoa, mifidy akanjo tsara tarehy ary avy eo dia hita fa ny ampahany ambany dia maneho bebe kokoa.
Ity vanim-potoana ity dia tsy afaka manao raha tsy misy akanjo amam-behivavy vehivavy an-tapitrisany. Izany dia ahafahanao mandanjalanja eo an-tendan-davitra ny firaisana ara-nofo sy ny tsy firaharahiana, ary azo antoka fa mahatonga ny olona hankasitraka ny lehilahy sy ny fijerin'ny vehivavy. Ny akanjo dia aseho eo amin'ireo andian-tsarimihetsika malaza indrindra amin'izao androntsika izao: Naeem Khan, Ralph Lauren, Valentin Yudashkin, Sherri Hill ary ny maro hafa. Ny akanjo modely-bustier amin'ny 2018 dia safidy lehibe avy amin'ny andavanandro isan-kariva, volo miloko marevaka, colorblocking, varimbariana isan-karazany: paingo, voninkazo, embroidery.
Mandeha amin'ny lanonana hariva, na antoko fitokanana, fety fampakaram-bady na baolina iray, tokony hifanaraka tsara ny safidy amin'ny akanjo. Ny tena zava-dehibe dia ny loko amin'ny akanjo (tsy tokony hiombona amin'ny aloky ny hoditra), ny karazana tarehimarika, ary ny safidy tianao. Ny safidy mandresy amin'ny fandresena, na inona na inona toe-javatra misy, dia ho lava be fandeferana lava. Manintona ny silhouette izy io, mijery tsara ary mahasoa amin'ny fotoana tena manetriketrika indrindra. Ny fanangonana vaovao amin'ny "mpanjakavavin'ny" akanjo hariva Sherri Hill dia manolotra modely tsy manam-paharoa, hatsarana tsy manam-paharoa, karazana karazana.
Ny endriky ny akanjo fohy dia tonga lafatra amin'ny fitsidihana ny teatra na manokatra ny fampirantiana. Ary koa ho an'ireo tranga maro hafa izay tsy mety eo amin'ny gorodona ny akanjo-bustier, raha tsy hoe takian'ny lalàna ny akanjo fitafy ataon'ny mpikarakara. Tena mahavariana izy ireo ary mendri-piderana. Tsy maniry ny hisafidy amin'ny karazana bodice ny akanjo maoderina amin'ny akanjo lava volo kely kely, dia toa somary marefo ihany, satria ny tendron'ny vatana dia efa voakilasy. Fa ny lohalika na ny kely kokoa dia hijery tsara. Red dress-bustier na mainty - mifangaro ny blondy sy ny brunettes, io no iray amin'ireo loko manintona indrindra.
Tandremo fa maro ny mpanamboatra mozika dia ahitana foana akanjo miaraka amin'ny akanjo marevaka ao amin'ny akanjo fampakaram-bady. Ary tsy zava-mitranga izany, satria amin'ny fomba toy izany dia mifanaraka tsara ny firindrana amin'ny endrika ivelany amin'ny ankapobeny, ny fahalemen'ny silhouette sy ny tanora. Eritrereto ihany koa fa tsy mafana loatra izany, ary na dia mianjera mandritra ny vanin-taona aza ny fankalazana dia afaka manipy bolero na akanjo manga eo amin'ny soroka ianao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Mifidiana izany araka ny endrika sy loko. White dress-bustier dia mifanandrify amin'ny ankizivavy manana hoditra maivana, ary ny loko ivour na pudrovye dia mainty.
Ny fisian'ny akanjo toy ny fety na akanjo hariva dia hevi-diso. Natolotr'ireo modely fanangonana ny lohataona-ny fahavaratra 2018 dia milaza ny mifanohitra amin'izany. Ohatra, akanjo maivana rongony avy amin'i Ralph Lauren misy akanjo lava baomba, mamorona safidy isan'andro, safidy mety amin'ny fandehanana manerana ny tanàna, azo arahina ary miasa amin'ny tsy fisian'ny fitsipika hentitra. Tsy misy fitafiana manome fiovàna toy izany ho fitafiana, na dia fomba fanao isan'andro aza. Miaraka amin'ny kiraro eo amin'ny tokontany tokana na volon-koditra, afaka mahazo akanjo mandritra ny fotoana samihafa.
Dress-case amin'ny bustier
Ity dia sokajy akanjo fitia malaza indrindra amin'ny vehivavy. Noforonin'i Coco Chanel be ravinala sy vavy izy, noho izany dia tsy mampihetsi-po fa mbola mijanona ho lamaody izy nandritra ny taompolo maro. Io fomba fanao io dia notarihin'i Merlin Monroe. Noho ny fahasimbana mitoka-monina, ny akanjo toy izany dia tena mitaky ny endriky ny tompony. Manokana ny fahadisoana rehetra, na ny fahalemen'ny tafahoatra na ny sofina amin'ny lafiny. Raha zatovovavy maivana ianao, dia mifidy akanjo mainty hoditra. Io loko io dia tsara tarehy ary mampihena ny fahalemena kely eo amin'ny fanorenana. Saingy mila miatrika ny fahamarinana ianao - mipetraka tsara kokoa amin'ny tovovavy miaraka amin'ny tobim-pikatrohana.
Dress-bustier miaraka amin'ny akanjo lava
Zatovovavy maro no manonofy an'io akanjo io, satria zaza ao aminy, satria ianao no mahatsiaro tena, raha tsy i Cinderella, dia ilay printsy ho azo antoka. Fotoana hanaovana izany kely, matetika izany dia akanjo fampakaram-bady na hariva. Karazana fifangajangan-tarehy, fahamendrehana, firaisana ara-nofo ary miaraka am-pirahalahiana, fahazavana amin'ny "tavoahangy" iray. Ny safidy dia tsy azo ampiharina sy mahasoa indrindra, fa tena tsara tarehy. Izany akanjo-kiraro ho an'ny ankizivavy tanora bevohoka na kely kokoa, izay manana fitomboana avo. Eny ary, raha tsy zazavavy ianao, ary toy ny akanjo tiany tena tianao, dia hanampy anao ny kiraro eo amin'ny valizy.
Zavatra voalohany, zavatra sarotra sy mamiratra. Aminy dia mila mitandrina ianao mba tsy handratra izany ary tsy hiampita amin'ny tsikombakomban-dazam-pahalemana. Aza simba ny sary miaraka amin'ny fitaovana fanampiny, satria izy io dia ornament. Mazava ho azy fa nasehon'izy ireo ny endrik'ilay vehivavy tena matoky tena sy be herim-po. Manao akanjo avy amin'io fitaovana io ilay tovovavy dia mivadika avy hatrany ho mpanangom-pitaka mamitaka, mazava ho azy fa manintona ny fomba fihevitr'ireo olona liana. Amin'ny ankapobeny, io akanjo lava fehiloha io, fa misy ihany koa ny loko. Izy io dia vita amin'ny hoditra marina na ny analogy.
Dress Bustier miaraka amin'ny sequins
Mba hahazoana tsipika mamirapiratra, mendri-piderana sy maoderina, manaova akanjo marevaka marevaka miaraka amin'ny lamosina. Raha toa ka fohy kely io, dia afaka mitsidika antoko mpihira na antoko hafa tsy ara-dalàna ianao. Ary ny lava dia tsara ho an'ny sary hariva. Maro ireo kintan'ny fandraharahana no miseho amin'ny hetsika isan-karazany amin'ny akanjo mitovy, ary manaraka akaiky ny fironan'ny lamaody. Manangana tontolo manokana izy, mamirapiratra mamirapiratra eo amin'ny fahazavana, izay hita taratra amin'ny loko matevina eo amin'ny tendanao sy ny tratrany. Ny fandravahana mahatalanjona toy izany dia mety ho kely na lehibe.
Ny lamba an-dantan'ny lamba dia mampiavaka ny fomba fitafin'io akanjo io ho an'ny fiainana andavanandro, mavitrika. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ireto akanjo rehetra mety aminao ireto - avy amin'ny fifampiraharahana feno hatsembohana amin'ny fehiloha , raha jerena ny zava-misy fa fitafiana ety ivelany izao. Miaraka amin'ny firoboroboan'ny firoboroboana eo amin'ny lamaody, izay sarotra ny mitazona izany, ny akanjon'ny denim amin'ny bodice bodice dia mijanona ivelan'ny fiovàna ary mety tsy ho very ny maha-zava-dehibe azy. Ny fiakanjo misy akanjo toy izany dia ahitana:
Karazan-java-manitra mahafinaritra mandritra ny andro fahavaratra;
Azo ampiharina, satria tsy zavatra mahavariana ilay fitaovana: maharitra, mora simba ary tsy manenitra;
mahafinaritra ny vatana;
Fahampiana, satria sarotra ny vidin'ny akanjo toy izany.
Dress bustier ho feno
Tena manify io fanontaniana io. Ny endriky ny fihodinana dia tsy manome toerana ahafahana "mihazakazaka". Fa ny akanjo ankamantatra ankapobeny ho an'ny ankizivavy feno dia afaka mijery tsara tarehy sy mirindra, satria tsy mitovy ny fahafenoana. Ny tena manan-danja dia ny hahazoana antoka fa tsara ilay akanjo, ary ny fanampiana ny fanondranana kilalao dia hanampy be dia be! Ny modely toy izany dia heverina ho toy ny hoe afenina ny fahadisoana rehetra, ary ny korset dia natao mba hahafahany manintona ny fahadisoana ao amin'ny vatan'ny olona. Mahagaga fa, raha misy ny akanjo eo amin'ny akanjo, manodina ny fomba fijery amin'ny faritra misy olana, na ny mainty dia mainty .
Avy amin'ireto voalaza etsy ambony ireto dia azo heverina fa ny akanjo an'io modely io dia vokatra azo itokisana. Fa mba hanampiana sy hanamafisana ny halavany sy ny hakanton'ny takariva, ny cocktail na ny safidy isan'andro dia hanampy ampahany sasany amin'ny toeram-pivoahana. Ao amin'ny sary maoderina sy tsara tarehy dia mety hisy fiantraikany betsaka: volon-koditra, makiazy, firavaka ary ny fihetseham-ponao. Aza hadinoina fa misokatra io fomba fijery io, izay efa mamirapiratra sy manintona ny tenany ankehitriny, ka rehefa mifidy ireo toetra sisa tavela dia mila raisinao izany. Ny fampiroboroboana akanjo-bustier, sary lamaody miaraka aminy dia hanampy amin'ny famoronana:
Footwear . Manana andraikitra lehibe amin'ny famoronana endrika tsara izy io. Raha toy ny akanjo hariva-bustier izany, ny kiraro, ny kapa volon-koditra midina na avo dia mety ho safidy tsara. Tandremo ny lokon'izy ireo, satria tsara fanonona na milalao mifanohitra amin'ny alokaloky ny akanjo, azonao atao ny manatratra sary mifanaraka sy mahaliana.
Ornaments . Afaka ny sofina lehibe na ny brasele izany. Noho ny fisokafan'ny kodiarana amin'ny akanjo, misy fotoana tena tsara hanehoana mazava tsara ny firavaka tsara tarehy iray, rojo misy mpihetsiketsika mampihetsi-po na kokoro kanto. Tsy afaka mametraka zavatra eo amin'ny tendanao ianao, tsara tarehy koa izany. Araka ny hevitr'ireo mpanakanto, ny haingon-trano dia mety ho kely sy kely, saingy tokony ho kely indrindra.
Cape . Mety bolero, boa, fehezam-boninkazo na palitao. Ny zavatra toy izany dia ho toy ny "heatera" mahafinaritra amin'ny vanim-potoana mahafinaritra. Ny fijerena amin'ny fety amin'izany dia tsy mijaly mihitsy, fa ny mifanohitra amin'izany, dia ho feno sy feno.
Linen dress in style of bokho
Sandale amin'ny fomba grika
Voantso izy ireo: 14 kintana tandrefana, izay nianarantsika manokana!
Inona no dikan'ny hoe "mivoaka"? Ny loha-laharana lehibe indrindra amin'ny kintana
Paris Hilton nanambara fifamatorana tamin'i Chris Zilka malalany ary nampiseho ny peratra
Karazana alika inona avy?
Na manaisotra ny adenoïd ny zaza?
Vaovao tsy nampoizina: Nankany Rosia i Mike Tyson, toerana izay efa nantsoina hoe ... Profesora
Mba hanafoanana ny famantaranandro, ahoana no fomba hanaovana azy io ary inona no tsy tokony hokasihina?
Zinokap-menaka - endri-javatra fampiasa amin'ny psoriasis, eczema sy olana hafa momba ny hoditra
Ny andro voalohany amin'ny fiainan'ny zaza vao teraka
Ahoana no nahafatesan'i Steve Jobs?
Momba ny Zwergschnauzer zato
Niatrika olana tamin'ny vadiny sy ny asa i Victoria Beckham
Sakafo avy amin'ny karaoty - sakafo mahasalama sy mahazatra ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Fihetseham-bolo kely eo amin'ny vatan'ny zaza